Elevator - Delta Injineer Belgium
Kaydso qaybta "Elevator"
Talaado, 14 Maarso 2017 by Injineer Delta
Wiishka dhalada ah
Dhalada wiish qaadashada dhalada ayaa kor ugu qaadda dhalada si heer sare ah khadadka gudbinta dhalada. Tani waxay noqon kartaa in la gaadhsiiyo dhalada kor iyo hoosba loo qabo meel sare, ama in loogu wareejiyo dabaqa kale. Iyada oo loo adeegsado 2 xirmo isku-wareejin oo ballac leh oo la hagaajin karo.
Published in Wareer
Jimco, 14 Maarso 2014 by Injineer Delta
Wiish kor u qaada
Alaabta kor u qaadeysa ee bacda kiishashka kor u qaaddo heer sare Tani waxay ku anfacaysaa xariiqyo waawayn oo loo kala qaybiyey xariiqado badan, halkaas oo wax ka qabashada bacaha ay dhib ku noqon karto. Qaabkaan, waxaad kaliya ugu baahan tahay 1 tunnel / dariiqa hooseeya ee mashiinnada badan.
Tag: boorsooyin, Joojinta khadka